साताको अन्तिम कारोबार दिन ५.३३ अंक घट्यो नेप्से, सबै समूह ओरालो, १०.०८% बढीको कारोबार
भदौ २६, काठमाडौं । गत साता बिहीवारदेखि लगातार घटेको नेप्से परिसूचक यस साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार पनि घटेको छ । यस दिन ५ दशमलव ३३ अंक घटेर नेप्से १ हजार १५७ दशमलव ३३ विन्दुमा आइपुगेको छ । यस दिन १ हजार १६३ दशमलव ७१ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको साढे १ घण्टाको अवधिसम्ममा घटेर १ हजार १५८ दशमलव १५ विन्दुमा आएको थियो । उक्त विन्दुबाट दोस्रो घण्टासम्म उकालो लागेको परिसूचक १ हजार १६२ दशमलव शून्य ६ विन्दुसम्म पुगेर पुनः ओरालो लागी अन्त्यमा अघिल्लो कारोबार दिन बुधवारको तुलनामा शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत घटेर बजार बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका ११ समूहमध्ये सबै समूहको परिसूचक घटेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो । सर्वाधिक घटेर बन्द भएको होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव २९ प्रतिशत घटेको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य, लघुवित्त, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कम घटेका छन् ।
बिहीवार रू. ३७ करोड ६१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बढेको हो । गत कारोबार दिन बुधवार रू. ३४ करोड १७ लाख रकम बराबरको कारोबार भएको थियो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने यस दिन शून्य दशमलव ९८ अंक घटेर २५३ दशमलव ७९ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
कालिका पावरको शेयरमूल्य ५ प्रतिशत बढ्यो
बिहीवार कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य ५ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ४ ले वृद्धि भई अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८४ पुगेको छ । यस्तै एनआईसी एशिया ग्रोथ फन्डको एकाईमूल्यमा ३ दशमलव १४ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य प्रतिएकाई रू. ८ दशमलव ८७ पुगेको छ ।
यस्तै अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ६ दशमलव ७९ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. ९६ मा सिमित भएको छ भने हिमालय उर्जा विकास कम्पनीको शेयरमूल्यमा ६ दशमलव ५० प्रतिशत घटेर अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ११५ कायम रहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक कारोबार
यस दिन लक्ष्मी बैंकको संस्थापकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको ४ लाख १९ हजार ७१७ कित्ता शेयरको खरीदविक्री हुँदा रू. ४ करोड ७० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ११२ कायम रहेको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंकको रू. ३ करोड ५४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ४४८ पुगेको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १६८ कम्पनीमा ३४ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने १०९ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २५ कम्पनीको शेयरमूल्य भने स्थिर रहेको छ ।